Chii chinonzi rusununguko uye munhu akasununguka? | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Chii chinonzi rusununguko uye munhu akasununguka?
Chii chinonzi rusununguko uye munhu akasununguka? Handina mubvunzo kuti vazhinji vakabvunza uyu mubvunzo. Zvingaita sekuti hazvinganetsi kumwana kupindura uyu mubvunzo. Nekudaro, iwe unogona kuipindura nekukurumidza uye muchidimbu?
Mubvunzo uyu hauite kunge wakaomarara kana kuomarara, asi unokanganisa kana kuita kuti vazhinji vafunge. Vese vanhu vandakabvunzurudza vakakwanisa kuipindura pasina kusara. Mazhinji emhinduro akange ari nyore zvisingaite uye akananga.
Rusununguko - rwepanyama here kana kuti rweMweya?
Zvinoenderana nevazhinji, rusununguko kugona kuita zvaunoda. Zvakaoma kupokana neizvi, asi zvakare zvakaoma kubvumirana. Iko rusununguko rwakaenzana chete kune banal "zvido" zvemunhu?
Rusununguko - iyi pfungwa yakakura kwazvo. Ichi chinhu chakatowanda.
Rusununguko ndiko kugona kurarama zvinoenderana nemitemo yako, pasina kuita zvinoda kune vamwe vanhu kuti vazvizadzise.
Rusununguko mukana wekuti uzadzikiswe mune chero nharaunda, mukana wekuzviwana iwe nenzvimbo yako pasi pezuva.
Rusununguko ndiko kugona kurarama zvinoenderana chete nemaonero ako.
Unogona kusingaperi kuverengera zvinorehwa uye kududzirwa kweshoko iri. Zvisinei, kana tichitaura nezvemunhu akasununguka, tiri kutaura nezvechimiro chemukati chemunhu. Tinoreva kugona kwake kurarama, asingaite hanya nemaonero, kana kushora kwevamwe vanhu.
Munhu akasununguka munhu anozvivimba uye nemano ake. Haatyi kuti kwete, haangataure zvikonzero kana kupomera mumwe wacho kukundikana kwake. Iye murume akasununguka haanyari nezvake uye haanzwe kuzvidemba nekuda kwekukanganisa kwake.
Kazhinji, rusununguko runobatana nekuyanana mukati mako, pamwe nekuzvimiririra kwemweya, nekushaikwa kwekutya kuzviratidza pachako kune vanhu vakatenderedza.
Mibvunzo ye57 mu database yakagadzirwa mu 0,484 masekondi.